आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र ३० गते बुधबारGandaki Press
वि.सं. २०७८ साल भाद्र ३० गते बुधबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ सेप्टेम्बर १५ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्रशुक्लपक्षको नवमी तिथि दिवा १२:२९ बजेसम्म, त्यसपछि दशमी रहनेछ ।
मेष : ठूला व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ । पढाइलेखाइमा मन जानेछ । उपकारी कार्य गर्न पाउँदा आनन्दको अनुभूति हुनेछ । मिहिनेती प्रबृत्तिको विकास हुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो नै रहने देखिन्छ ।
वृष : कठोर बानी व्यवाहारका कारण आफन्तजनहरु टाढिने छन् । नयाँ लगानि एवं टाढाको यात्रा शुभ देखिन्न । गलत व्यक्तिको संगतले गर्दा नकारात्मक कार्यमा सहभागी भइनेछ । चिन्ता, पीरले सताउनेछ ।
मिथुन : विशेष कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ । मानसिक क्षमतामा बृद्धि विकास हुनेछ । पतिपत्नि बीच सामजस्यता रहनाले कार्य गर्न सहज हुनेछ । मन मिल्ने व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी भइनेछ ।
कर्कट : मान्यजनको साथ लिएर कार्य गर्दा शुभ हुनेछ । सुखसुुविस्ताका साधनहरु जुट्नेछन् । सामान्य झन्झट आइ लागेता पनि निरन्तर लागि पर्दा जीत तपाईँकै हुनेछ । श्रम मार्गबाट अपेक्षित लाभ मिल्दा हर्ष बढ्नेछ ।
सिंह : टाढिएका आफन्तजनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्नेछ । नयाँ ठाउँको भ्रमणले नयाँ सिपको विकास हुनेछ । । पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ । पुराना समस्यालाई हल गर्दै नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्न सकिनेछ ।
कन्या : शारीरिक कमजोरीले कार्य गर्न मन लाग्ने छैन । व्यर्थको कार्यमा भुल्दा गर्नैपर्ने कार्य भने अधुरै रहनेछन् । गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा परिनेछ । दैनिक काम कार्यमा नै व्यस्थ रहनु उचित हुनेछ ।
तुला : पराक्रम बढेर जानेछ । दाजुभाईको साथले महत्वपूर्ण कार्य बन्नेछ । जोखिमयुक्त कार्यलाई पनि सहज तवरले पूर्ण गर्न सक्दा प्रशंसकहरु थपिनेछन् । घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ । शुभ समाचार मिल्नेछ ।
बृश्चिक : सहनशिलता र कृयाशिलताको बृद्धिविकास हुनेछ । व्यवसायमा अरु दिनको तुलनामा आयदर बढ्नेछ । बोलिकै भरका ठूला काम बन्नेछन् । आर्थिक व्यवहार सहज बन्नेछ । नयाँ मित्र बनाइनेछ ।
धनु : सन्तोषी प्रबृत्तिको विकास हुनेछ । नयाँ पद–प्रतिष्ठा मिल्ने समय रहेको छ । बोलि कै भरमा ठूला–ठूला कार्य पनि सहजताका साथ बन्नेछन् । सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ । आकस्मिक धनलाभको योग बनेको छ ।
मकर : समस्या र चुनौतिको सामना गर्नु पर्नेछ । अरु दिनको तुलनामा शैक्षिक क्षेत्रमा ह्रास आउनेछ । आर्थिक पक्ष कमजोर बन्नेछ । विश्वास गरेका व्यक्तिले साथ छाड्ने छन् ।सतर्कका साथ कार्यमा लाग्नुहोला ।
कुम्भ : मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सहभागी हुने निम्तो पाइनेछ । एघारौं भावको चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले आर्थिक पक्षमा विशेष सुधार हुनेछ । दैनिक कार्यमा समेत नयाँ तरिकाको प्रयोगले कार्य गर्न सहज हुनेछ ।
मीन : श्रम अनुसारको आर्थिक लाभ मिल्नाले काम गर्ने हौसला थपिनेछ । प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कार्यलाई पहल गर्दा पूर्ण गर्न सकिनेछ । कार्य क्षेत्रमा नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ । विश्वासको पात्र बनिनेछ ।